Downloads 46 516
Waxay abuureen 18-08-2010
Author: Thomas Ruth, Weedho by Dennis Vormberge
Updated on 26 / 09 / 2018 : Hadda xirmo hadda ku habboon diyaarinta PreparhNUMXD v3 +, wuxuu ku daray FMC, wuxuu ku daray Nidaamka Autoland (akhriska Autoland_Manual_v4.pdf), wuxuu ku daray GPWS ee Airbus, wuxuu ku daray NIDAAMKA DATA iyo V-Speed, wuxuu ku daray nidaamka cusub ee gacanta lagu hayo (RCB Ground Handling).
Farshaxan tayo leh oo tayo sare leh ee Airbus A300 B1, B2, iyo B4. Qalabkani waa mid aad u sarreeya, oo ay ku jiraan naqshadaha 10 (sida ZERO-G) iyo dhawaaqyo gaar ah.
Laba ka mid ah ayaa la dhisay: kumbuyuutarka ugu horreeya, iyo diyaarad labaad oo loo kiraystay bishii November 1974 ee Trans Air European Airways (TEA). TEA waxay markiiba soo raacisay diyaaradda muddo lix toddobaad ah si ay uhesho Air Algérie. Waxay leedahay hoy ku rakiban Rakaabka 300 (TEA) ama rakaabka 323 (Air Algérie) oo leh miisaanka ugu badan ee 132,000 iyo laba General Electric CF6-50A makiinadaha 220 kN.
Nooca ugu horreeya soo saarista. Isticmaalka General Electric CF6 ama Pratt & Whitney JT9D makiinadaha (makiinadaha isku midka ah ee ku shaqeeya Boeing 747-100, "jumbo jet air jet") oo u dhexeeya 227 iyo 236 KN, waxay adeegsatay Air France bishii May 1974. A300B2 waxay samaysay duulimaadkii ugu horreeyay bishii June 28, 1973 waxayna ahayd shahaadooyin Faransiis iyo Jarmal ah oo ku saabsan 15 March March 1974 iyo oggolaansho FAA oo la raacay May 30, 1974. Waxyaabaha ugu horreeya ee A300B2 (lambarka A300 5) ayaa ka dhigtay duulimadeeda gabdhaha 15 April 1974 waxaana loo wareejiyay Air France dhowr isbuuc ka dib May May 10, 1974. A300B2 waxay adeegga dakhliga ku soo gashay 23 May 1974 inta u dhaxaysa Paris iyo London.
* A300B2-100: 137 ton Ton MTOW
* A300B2-200: 142 ton Ton MTOW, cayo Kruger, bixinta ugu horeeyay ee South African Airways in 1976
* A300B2-300: kordhay ugu caga Culayska / ugu Zero Shiidaalka Weight
The version saarka waaweyn. Maqaallo haan shidaal xarunta for awoodda shidaalka kordhay (47,500 kg). Production ah B2 iyo B4 ahayd 248. A300B4 hore (9th A300) ayaa u duulay 25 December 1974 oo waxaa shahaado on 26 March 1975. bixinta ugu horreysa ee la sameeyey si Germanair (taasi oo markii dambe ku biireen galay Hapag Lloyd) on 23 May 1975.
* A300B4-100: 157.5 ton Ton MTOW, bixinta ugu horeeyay ee Germanair in 1975.
* A300B4-200: 165 ton Ton MTOW, bixinta ugu horeeyay ee Hapag-Lloyd Flug in 1980
* A300B4-200FF: A300 An leh "horey u sii jeeda" qol markabka. Diyaaradahan ugu horeysay adduunka ee 2-shaqaale widebody. Waxaa ka mid ah qaar ka mid ah hage digital ah A310 iyo A300-600 ee. adeegga miinshaar First la Garuda Indonesia ee 1982, macaamiisha sii ahaayeen VASP, Tunisair, Kar-Air / Finnair iyo MNG Airlines.
* A300B4-600: Gudbiyay sida ku-A300 600. Hoos eeg.
* A300C4: bedeli version Markab, iyadoo albaab xamuul badan dhinaca dekedda. First u dhiibay in South African Airways in October 1982.
* A300F4-203: version Markab xamuul ah-A300B4 200. bixinta First ka dhacay 1986, laakiin kaliya aad u yar oo la dhisay sida-A300F4 200 waxaa ugu dhaqsaha badan bedelay A300-600F (magaca rasmiga ah: A300F4-600F) ayaa in ka badan awood.
Waxaa laga soo xigtay: Wikipedia